के गर्ने बालबालिकालाई स्वस्थ बनाउन ? जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
जबरजस्ती सिकाउँन सकिदैन
हामीलाई हरेक बच्चाले सिक्न सक्छन् भन्ने लाग्छ । हो, हरेक बच्चाले सिक्न सक्छन् तर उनीहरुलाई सिकाउँनु पर्ने तरिका फरक हुन सक्छ । त्यस्तै उनीहरुको रुची फरक फरक हुने हुनाले उनीहरुलाई सिकाउँनु पर्ने बिषय पनि फरक हुन सक्छ । सबै बच्चाले सबै कुरा उत्तिकै पारंगत भएर नसिक्न सक्छन् । यसको अर्थ उनीहरु लोसे वा दिमाग नभएर होइन बरु सिकाउँने तरिका र बिषय फरक परेर हो ।
तपाई, हामी बिहान सबेरै उठ्ने बिरलै छौं । रातीको पार्टी, कामको चापलगायत कारणले एकाबिहानै उठ्न त्यति सजिलो छैन ।
के तपाईंको अभिभावकले साँझ ८ बजे अगाडि नै खाना खान र सुत्न जोड गर्नुभएको छ ? तपाईले पनि यस्तो सुन्दर आदत आफ्ना सन्तानमा पुर्याउनुहोस् ।
आयुर्वेदमा उल्लेख भए अनुसार साँझ पर्ने/नपर्ने बेलामा खाएको खाना प्रकृतिको नियम र चक्रअनुसार हुन्छ । शरीरलाई पनि निकै हितकर हुन्छ । गाउँघरमा अझै पनि साँझ पर्नु अगाडि वा साँझ परेपछि खाना खाने चलन छ ।
Don't Miss it हाेसियार ! दिमाग कमजोर बनाउने यस्ता गलत बानी त छैन तपाइकाे ?
Up Next मानिसलाई बिरामी बनाउने भाइरस कुन समयमा बढी सक्रिय हुन्छ ? जानीराखाै